Dowladda Mareykanka oo ka digtay ‘Doorasho hal dhinac ah’ inay ka dhacdo Soomaaliya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Dowladda Mareykanka oo ka digtay ‘Doorasho hal dhinac ah’ inay ka dhacdo...
Muqdisho (Halqaran.com) – Dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya in ay ka fiirsato qabashada doorasho hal dhinac ah oo dhalin karto muran iyo qalalaase Siyaasadeed.
War qoraal ah oo ka soo baxay Safaaradda Mareykanka ayaa looga digtay siyaasiyiinta Soomaalida hannaan doorashooyin oo isgarab socda, ama doorashooyin hal dhinac ah.
Sidoo kale, Dowladda Mareykanka ayaa waxay ka digtay gacan ka hadal.
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa sheegay in uu kulamo kala duwan la yeeshay qaar ka mid ah hoggaamiyayaasha siyaasadda oo ay ka mid yihiin Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre, Madaxweynayaahsii hore ee Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo Koonfur Galbeed Shariif Xasan Shekeh Aadan iyo siyaasiyiin kale.
Dawladda Dederaalka, maamul goboleedyada qaarkood iyo musharrixiinta mucaaradka ayaa isku khilaafsan guddiyada doorashada Federaalka, kan Somaliland iyo weliba sida doorashadu uga dhacayso gobolka Gedo.
Si kastaba, Beesha Caalamka ayaa wada dadaalo lagu doonayo in laga gaaro heshiis khilaafka ka jira doorashooyinka dalka.
Doorasho hal dhinac ah
Safiir Donald Yamamoto